Top 15 Winstrol Faa'iidooyinka Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato Inta Aan Bixin Winstrol Online
/blog/Gallery/Top 15 Winstrol Waxtarrada Waxaad u Baahan Tahay Inaad Ogaato Inta Aan Laga Helin Winstrol Online
Posted on 01 / 17 / 2019 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
1. Waa maxay Winstrol?
2. Sidee ayuu Winstrol u shaqeynayaa?
3. Top 15 Winstrol Faa'iidooyinka ku jira Dhismaha jirka
4. Iskuulka Winstrol
6. Waqtiga Wakhtiga Wakhtiga
8. Winstrol Daaweynta Baaskiilka
9. Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa si ay u aragto natiijooyinka Winstrol?
10. Saameynada Caadiga ah ee Winstrol
11. Sida looga fogaado Winstrol Side Effects
13. Sida loo iibsado Winstrol Online
14. Winstrol Pudding Powder
re steroids anabolic sheyga la hubo markaad raadinayso inaad hoos u dhigto miisaanka jidhkaaga oo aad si isku mar ah u ilaaliso cufka muruqa? Soo ogow haddii ay u qalanto bangiga stanozolol (Winstrol) steroid, faa'iidooyinka ay ku leedahay steroids kale, iyo sida loo iibso winstrol.
Haddii aad rabto in aad gubto dufanka oo aad haysato tiro jireed oo saafi ah, waxaad u-qortaa qolka jimicsiga oo aad sameysatid hawlo qaas ah. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay u baahan tahay joogtayn iyo tababar joogto ah. Sida keliya ee hubaal ah lumiyaan miisaan si deg-deg ah, u leeyihiin dulqaadka ugu badan, iyo helitaanka ama sii wadista xajinta muruqa waa iyada oo la qaato taakuleyn dheeri ah.
Si ka duwan noocyada kale ee steroids oo ay saameyntoodu ay ka badan tahay faa'iidooyinka, winstrol waxay leedahay faa'iidooyin badan user. Mid ka mid ah waxyaabo kale oo ay tahay in aad ogaato waa in uu leeyahay waxoogaa daaweyn ah.
Waa maxay Winstrol?
Sharaxaad ka mid ah Winstrol
Kahor intaadan degin boggan, waxaa laga yaabaa inaad weydiisay dhowr su'aalood oo la xiriira, "Waa maxay winstrol iyo maxay qabataa?" Hagaag, maqaalkani wuxuu daaha ka qaadi doonaa wax ka badan intaad rabtay inaad ogaato.
Winstrol ama Stanozolol waa a steroids synthetic oo leh labadaba anabolic iyo androgenic labadaba. In foomka cayriin, this organic kiimikada organic ku dhejiyaa CAS no. 10418-03-8. Stanozolol wuxuu ka soo qaataa dihydrototestosterone (DHT). Hannaanka qaab-dhismeedka wuxuu ku lugleeyaa 3-keto-aldehyde oo ah oxymetholone oo leh hydrazine.
Winstrol waxaa loo heli karaa sida daawada afka ama la isku duro. Waxay u shaqeysaa iyada oo bilaabaysa isku-darka borotiinka iyo dardargelinta koritaanka murqaha. Ka sokow, dadka intooda badani waxay ku dhejiyaan inta lagu jiro wareegga goynta si ay u gaaraan muuqaal la gooyey laakiin lab ah. Daawadu waa mamnuuc wadamada intooda badan oo ay ku jirto USA FDA waxay u qoondaysay sida walaxda fasalka III.
Inkasta oo ay soo bandhigeen sifooyinka anabolic, winstrol waxay sidoo kale ku qanacsan tahay isticmaalka daaweynta. Tusaale ahaan, waxay daaweyn kartaa cudurrada muruqyada laf-dhabarka, kicinta wax soo saarka hemoglobin, iyo daaweynta cudurka anjioedema. Inkastoo stanozolol oo kaliya lagu helo warqad dhakhtar oo dhab ah, weli waad heli kartaa Winstrol iibka dukaamada intooda badan.
Daawadani waa saddex cuncun anabolic ah marka la barbar dhigo testosterone. Qaadashada steroid C17-alpha alfated, stanazolol waxay leedahay qaab dhismeed oo aan caadi ahayn oo keena beddelidda hormoonka dihidrotestesterone hormone. Sababtan awgeed, walaxda waa 10x anabolic taas oo ka dhigan tahay inrogenic.
Qiimeynta Anabolic 320 100
Qiimeeynta Androgenic 30 100
Winstrol marka hore wuxuu ku soo jirey 1959. Winthrop Labs-yada waxa ay u samaysay iyada oo ujeedadeedu tahay in lagu daaweeyo xaaladaha murqaha iyo xaaladaha murqaha. Awoodda ka haysashada nitrogen ee daroogada waxay u dhigtaa daawada saxda ah ee xaaladaha murqaha. By 1962, waxay hore u guulaysatay oggolaanshaha Maamulka Cuntada iyo Maandooriyaha (FDA).
Maxaa ka dhigay Winstrol caanka ah waa muranada doping ee lahaa inta lagu jiro 1980s Olympics. Waan sharxi doonaa. In ciyaaraha fudud ee 1988, Ben Johnson wuxuu ku guuleystay bilad dahab ah markii uu ku guuleystay tartanka 100M. Waxa uu dhigay rikood cusub oo uu ku garaacayo xiddiga ugu fiican ee Olympiakos, Carl Lewis.
In kasta oo uu ahaa guuleyste, orodyahan heer caalami ah, Johnson waxaa loo ceebeeyay isticmaalka Stanozolol si uu u xoojiyo waxqabadkiisa. Sidaa awgeed, mas'uuliyiintu waxay ka xayuubiyeen billaddiisii ​​markii dambena way ka joojiyeen ciyaarihii Olombikada.
Ka dib markii steroid anabolic loo yaqaan inay noqoto mid wax ku ool ah, inta badan cayaartoyda ayaa raacay farsamooyinka ay ku duuban yihiin ciyaaraha. Si kastaba ha noqotee, dowladda Mareykanka ayaa aad ugu adkayd isticmaalka steroids. Natiijadu, waxay adkaysay sharciyada xukuma wax soo saarka, isticmaalka, iyo iibinta waxtarkaas.
Winstrol magaca Brand
Ogsoonow in qaabka cayriin ee daroogada ay tahay kiimikada kiriimka ah ee cad-cad. Dadka intooda badani waxay helayaan dhadhanka "winstrol" inay xoog yeeshaan.
Sidee ayuu Winstrol u shaqeynayaa?
Winstrol waa steroid heterocyclic oo leh xiriir adag oo isku xiran oo loogu talagalay qaboojiyeyaasha androgen. Kaliya maahan inay soosaarto borotiinka laakiin sidoo kale waxay xoojineysaa sameynta kolajka. Daroogadu waxay dedejisaa ficil-celinta borotiinnada iyadoo ay markaa dib u rogto waxqabadyada catabolic.
Waxay hoos u dhigtaa heerarka galmada ee galmada Globulin (SHBG), markaa, waxay kicineysaa kororka testosterone lacag la'aan ah. Markaa kadib, jidhkaaga ayaa u maleynaya sifooyinka anabolic.
Saameynaha ugu caansan ee anabolic steroid waa astaamaha estrogenic. Si kastaba ha noqotee, winstrol waligeed aromati ahaan ma geli doonto estrogen. Sababtu waxay tahay A-giraanta oo beddeshay kooxda 3-keto, oo ka dhigaysa daroogada steroid qallalan.
Joogitaanka kooxda methyl ee qaab-dhismeedkeeda waxay kordhisaa bioavailability-ka stanozolol ee jirka. Natiijooyinka winstrol ayaa la ogaan doonaa ugu horreyntii 14 maalmood.
Top 15 Winstrol Faa'iidooyinka ku jira Dhismaha jirka
Haddii aad rabto inaad ka faa'iideysato faa'iidada winstrol, waa inaad ku dartaa a tababarka joogtada ah nidaam iyo cunto caafimaad leh. Inta ugu badan ee jirkeena ku kala duwan marka la eego tallaabada daroogada iyo falcelinta, raacitaanka daawada iyo dayactirka wareegga gaaban ayaa kaa badbaadin doona saamaynta daawada.
Faa'iidooyinka Winstrol 1: eber Khatarta udgoonka Estrogen
Maxaa ka dhigaya Winstrol inuu ka dhex muuqdo dhammaan steroids kale ee anabolic waa xaqiiqda ah inuusan u beddelin estrogen. Isticmaalayaasha labka ah, tani waa muuqaalka ugu muhiimsan ee aad ka raadin karto daroogada kor u qaada murqaha.
Aan sharaxo. Marka jirka gudihiisa, steroids waxay u muuqdaan inay u badalaan estrogen. Saameynada daawada estrogenic kuma farxi doonto gaar ahaan markaad ku dhex socoto naasaha dumarka ah, taas oo bulsho kasta ay ku faani karto.
Haddii ay jiraan wax kaa tagi doona miisaan ku saabsan khatarta eberka ee aromatization, ka dibna waa winstrol iyo ciriiriga macaan. Labadan steroids ma muujiyaan saamaynta domino ee isbedelka estrogen ama sii haynta biyaha.
( 4 5 6 7 ) ↗
Winstrol faa'iidooyinka 2: Muruq Gain
Winstrol wuxuu ka ciyaaraa door ka qaadashada korriinka anaboliska. Waxay keentaa unugyada muruqyada inay soo saaraan oo ay haystaan ​​borotiinno badan sida ay u awoodaan, markaa, kordhinta muruqyada iyo awoodda. Sababtoo ah kordhinta nidaamyada dheef-shiid kiimikaad, jidhku wuxuu soo saaraa adenotriphosphate more, taas oo qaadata doorka weyn ee dhismaha muruqyada.
Ku dhaji stanozolol oo leh steroid Deca iyo qaar ka mid ah jimicsiyada isku dhafan, waxaadna heli doontaa winstrol-kaaga kahor iyo kadib natiijooyinka fayras ku dhaca.
Faa'iidooyinka Winstrol 3: Xoog iyo Adkeysi
Xirfadle kasta oo xirfadle ah ayaa xaqiijin doona oo xaqiijinaya in steroid, oo kordha oo kaliya kordhinta muruqa adoon kor u qaadin adkeysigaagu waa wax aan faa'iido lahayn.
Marka, sidee ayuu stanozolol u hagaajiyaa xoogagaaga? Aan sharaxo. Daroogooyinka lagu daro wax soo saarka unugyada dhiigga cas ee jidhkaaga. Maadaama unugyadaas ay mas'uul ka yihiin qaadista oksijiin, murqaha sidoo kale helitaanka oksijiin ku filan si loo adkeeyo laylinta dheeraadka ah iyo kuwa adag.
Thanks to awoodda cortisol-blocking, winstrol waxay dardar galin doontaa hannaanka soo kabashada iyo ka hortagga buufiska ama niyadjabka. Sababtan darteed waa kuwa isticmaala kuwaas oo ka qeyb qaadanaya isboortiga tartanka ah sida baaskiilka ama tartanka tartanka, bangiga on steroids si kor loogu qaado waxqabadka.
Faa'iidooyinka Winstrol 4: Wareegga Bulking
Dhaqtarka ayaa u muuqda inuu qora "winstrol" bukaansocodka ay ku adkaato inuu helo miisaan caadi ah. Si kastaba ha noqotee, tani maahan qodob sax ah oo aan rabo inaan ku dhejiyo.
Dumarka waxaa lagula talinayaa in ay iska ilaaliyaan istaandarka anabolic sababtoo ah waxyeellooyinka soo if-baxa ah ee keena. Taa bedelkeeda, halkan waa war wanaagsan oo ku saabsan dheelitirka jinsiga ee warshadaha dhismaha jirka. Winstrol haweenka waxaay hubineysaa inaad kor u qaaddo muruqyada caatada ah adigoon raali ka ahayn timaha jidhka oo kordhay, xubinta taranka, ama dhawaaqyada qoto dheer.
Faa'iidooyinka Winstrol 5: Khatarta Hoose ee Saamaynnada Androgenic
Winstrol wuxuu ka mid yahay stobbaarada yar ee anabolic oo leh darajo hoose oo hooseeya. Sidaa darteed labadaba labka iyo dheddigga labadaba uma badna in ay la kulmaan maqaarka ama finanka oo aan caadi ahayn oo aan caadi ahayn.
Si kastaba ha noqotee, micnaheedu maahan inaad ka badbaado dhamaan waxyeelada winstrol. Ii ogolow in aan daaqad ka dhigo halkan. Shakhsiyaadka qaarkood waxay u nugul yahiin kuwa koritaanka iyo xinjirta xitaa xitaa soo-gaadhista yar. Haddii aanad ku hoos dhicin qaybtan, markaa daroogada ayaa si fiican kuu siin doonta.
Faa'iidooyinka Winstrol 6: Muuqashada Caatada ah (Gooynta Wareegtada)
Ku dhowaad dhammaan steroids dhiska waxay keeneysaa saameyn xoog leh illaa iyo inta kooxaha muruqyada ay sidoo kale daboolan yihiin. Haddii aad tahay jimicsi jidh-dhise ah ama tartan orodyahan ah, muuqaalka weyn ayaa laga yaabaa inuu farageliyo waxqabadkaaga tartan.
Sheyga ugu fiican ee winstrol waa in ay ka caawisaa isticmaalka inuu isticmaalo murqaha saafiga oo kaliya. Sababtaas daraadeed daroogada waxaa loo isticmaalaa marxaladda jarista si loo yareeyo dufanka jirka mudada wareega. Isku-xuubka kubbadda cagta ee la yiraahdo Primobolan iyo waxaad ku arki doontaa muuqaal adag oo muuqaal ah.
Faa'iidooyinka Winstrol 7: Biyo Hayn la'aan
Hormoodka Androgenic ee ku jira anabolic steroids ayaa ah sababta ugu weyn ee sabirta soodhiyeynta, markaa, jimicsiga jirku inuu hayo biyaha. Daawooyinka estrogenic ka badan daawooyinka waa, biyo badan oo jirkaaga haynayaa. Ka sokow, saameyntani waxay ku xidhan tahay jaridda iyo dhiig-baxa.
Illaa iyo hadda, waxaa jira seddex sambal oo kaliya oo leh siyaalo lagu durayo. Kuwani waa stanozolol, anavar, iyo trenbolone. Haddii aad tahay inaad isbarbardhigto faa'iidooyinka Winstrol vs anavar, waad ogaan laheyd in labaduba leeyihiin saameyn gaar ah oo jirka ah. Si kastaba ha noqotee, Winny ayaa kaa caawin doonta inaad hesho murqo ka badan seddexda kale ee steroids.
Faa'iidooyinka Winstrol 8: Isticmaalka Daaweynta
Maskaxda ka dambaysa Winstrol waxay soo saartay steroid iyadoo ujeedadu tahay naas nuujinta xaaladaha miyir-beelka. Isticmaalka daaweynta aasaasiga ah ee stanozolol waa daaweynta cudurka anjioedema, taas oo ku lug leh bararka wajiga, cunaha, ama xubnaha taranka.
Xaalado kale oo kuusoo qori doona daawada winstrol waxaa ka mid ah boogaha dilaaga ah, dhiig-yaraanta, dhiigga, osteoporosis, dhaqdhaqaaqa fibrinolytic, ama shaqo-la'aanta. Ka sokow, steroid waa daaweynta ugu dambaysa ee cudurada gaarka ah, oo kaliya lagu maamuli karo oo kaliya iyada oo la leexinayo geeddi-socodka hab-raaca.
Miyaan xusuusiyay in winstrol labajibaaray sida manida iyo xayawaanka xayawaanka? Hadda waad taqaanaa! Inkastoo kor u qaadista waxqabadka xayawaanka ee ka qayb qaadanaya tartamada sida tartanka faras, Winny sidoo kale waa daroogo madow. Waxay kicisaa kobcinta ubaxyada waxayna maamushaa cudurrada ugu badan nafaqada ee bisadaha iyo eyda.
( 8 9 10 ) ↗
Faa'iidooyinka Winstrol 9: Perfect for Stacking Steroid
Inkastoo ay jiraan kala duwanaansho kala duwan steroids anabolic, iskama soo koobi kartid sida nacnac oo kale. Isku dheelitirka steroid ee saxda ah wuxuu dammaanad qaadayaa natiijooyin aad u fiican. Si kastaba ha noqotee, dhibaatadu waxay timaaddaa markaad u baahan tahay inaad aqoonsato mid ka mid ah waxyaabaha dheeraadka ah ee si fiican u la mid ah midka kale, iyo sida ugu wanaagsan ee aad isugu dari karto oo aad u dhigmi karto
Ii ogolow inaan sharaxo sababta aad ugu baahan tahay Winstrol adoo isticmaalaya daawooyin kale.
Inta badan steroids anabolic waxay ku xidhan tahay geedka jimicsiga-Galmada Globulin. Xidhiidhka sare ee SHBG waxa uu naqshadeeyaa ficilka steroid ee jirka qofka, sidaas awgeed, maandooriyaha aan waxtar lahayn.
Kiisku wuu ka duwan yahay winstrol tan iyo markii uu hoos u dhigo heerarka SHBG ee jirka. Sidaa darteed, waxaad ku dhejin kartaa dhowr steroids oo weliba waxay yeelan kartaa murqaha caatada ah iyo qaabdhexaad dheeli tiran. Iskudhafka Winstrol ee ku habboon waxaa ka mid ah trenbolone, kardarin, Primobolan, isarine, anavar, ama masteron.
Testosterone sidoo kale waa u fiican yahay xargaha laakiin hubi inaad qaadato qiyaas yar oo aanad ku dhicin waxyeello aromaticization.
Winstrol faa'iidooyinka 10: Bioavailability sare
Bioavailability of steroids mar walba waxay go'aan ka gaari doontaa awoodeeda. Isticmaalka stanozolol, waxaa jira koox methyl ah oo ku jira dhismaheeda taas oo ka dhigaysa inay udhacdo ilaa saacadaha 24. Daroogada kor u kaca ah ee bukaanka ayaa ku gudbin karta beerka iyada oo aan la jebin.
Winstrol faa'iidooyinka 11: Multiple Ways of Administration
Waad ku qaadan kartaa winstrol hadal ahaan ama irbadaha lagu duro. Qofkii hore ayaa loo maamulaa laba jeer maalintii tan iyo noloshiisii ​​nuska ahayd sagaal saacadood. Taa bedelkeeda, kan dambe wuxuu leeyahay nolol badhkeed, sidaas darteed, hal mar maalintii la qaato.
Haddii aan dooneyno in warbixinnada macaamiisha ay tagaan, dadka isticmaala intooda badani waxay aaminsan yihiin in foomka la muday uu keeno natiijooyinka ugu fiican. Si kastaba ha noqotee, hal shay oo iyaga ka mid ah ayaa ku dhufan doona cayayaan waa cirbad xanuun, oo xitaa ka dib maamulka.
Ma waxaad rabtaa in aad ka gudubto saameynta dhinaca sunta ee sunta? Ka dibna waa inaad iska duri halkii aad liqi lahayd kiniinka. Isku tallaalka, winstrol wuxuu si toos ah u gali doonaa habka wareegga dhiigga iyadoo aan la geyn Karin beerka.
Faa'iidooyinka Winstrol 12: Waxyeelooyin Yaryar
Sida dawooyinka kale oo kale, winstrol waxay leedahay waxyeelo sidoo kale. Si kastaba ha noqotee, markaad ku dhegto qiyaasta Winstrol ee lagugula taliyay adoo ilaalinaya wareegga muddada-gaaban, waxaad la kulmi doontaa wax yar oo aan saameyn lahayn.
Badanka ugu badan ee jirrada ku dhaca ee dadka necbahay waa kuwa ay keento hormoonnada hormoonnada iyo estrogenic. Xaaladdan oo kale, winstrol waxay leedahay qiyaasta ugu hooseeya ee korriinshaha mana lahaan kartid u beddelidda estrogen. Sidaa darteed, waxaad tahay badbaado!
Faa'iidooyinka Winstrol 13: Faa'iido u leh Haweenka
Qaar badan oo ka mid ah steroids anabolic ayaa ka hor istaagaya dumarka sababtoo ah suurtogalnimada sare ee fal-celinta iyo iyoxogenic. Heerarka sarreeya ee qufuca waxay keeni kartaa timo jilicsan ragga, codka qoto dheer ee dumarka, iyo waxyaabo kale oo waxyaabo kale oo cajiib leh oo aanad ku faani doonin.
Kiisku wuu ka duwan yahay stanozolol maaddaama ay ka mid tahay dhowr steroids oo qiimeyntooda asrogenic ay hooseyso. Isbarbardhig deg deg ah oo udhaxeeya saamiga androgen iyo anabolic ee daawadan iyo testosterone waxay qiyaastii u dhigmi doontaa 10.7: 1 iyo 1: 1, siday u kala horreeyaan. Qiimayaashan, waxaad hadda fahantay sababta aad weli bangiga ugu heli karto winstrol-ka dumarka adigoon u noqon Jay Cutler.
Winstrol faa'iidooyinka 14: Animal Steroid
Xannaanada xoolaha, stanozolol (Winstrol / winny) waxay ku faantaa dhowr adeegsi oo daaweyn ah iyo sidoo kale inay tahay steroid dhiska. Markii hore, qaabka la isku duro waxaa kaliya loogu talagalay xoolaha. Dadka qaarkiis waxay u isticmaali lahaayeen daroogada markay u ciyaarayaan tartanka fardaha ama tartan kale oo xayawaan ah oo la xiriira.
Faa'iidooyinka Winstrol 15: Xawaaraha iyo Firfircoonaanta
Waxaa suurtagal ah in aad su'aal ka keento sababta cayaaraha naadiga ah uu u socon doono steroid, kaas oo kaliya dhisi doona muruqyada wuxuuna ka tagayaa saameyn baaxad leh. Waa hagaag, winstrol ma sii kordhin doono madaarkaaga laakiin sidoo kale wuxuu gacan ka geysanayaa kor u qaadistaada iyo xawaaraha guud ahaan. Dhamaantiis, ciyaartooyda waxay ka warhayaan waxqabadkoodii halkii ay ka ahaan lahaayeen maskaxda.
Haddii aan ahaan laheyn inaan wada hadalno faa'iidooyinka winstrol, Waxaan u maleynayaa inaan u baahanahay buug dhan. Qaar ka mid ah faa'iidooyinka dheeraad ah waxaa ka mid ah xoojinta lafaha lafaha, xoojinta jilicsanaanta iyo jilciyada, iyo soo saarida muuqaal adag laakiin damqasho leh.
Winstrol waxa uu ku siinayaa farsamada casriga ah ee lagu kala doorto qiyaasta daawada ee loo qaato ama la isku duro. Labadaba waxay ka kooban yihiin stanozolol hormoonka firfircoon ee leh C17-aa steroids. Waqtiga saxda ah ee lagu maamulayo daroogadu waa kahor ama waqtiga cuntada.
( 11 12 13 14 ) ↗
Af ahaan, stanozolol waxaa lagu heli karaa qaab kaniini ah ama kaniini ah. Maaddaama winstrol nolosha nuskeed ay u egtahay illaa sagaal saacadood, waxaad u baahan doontaa inaad qaadatid laba jeer maalintii si aad u ilaaliso bioavailability.
Qiyaasta afka ayaa ku kala duwan 40 ilaa 80mg. Qiyaasta Winstrol ee caadiga ah waxay ku xiran tahay dhowr arrimood sida waayo-aragnimada qofka ee steroids, heerka dulqaadka, iyo waxa aad rabto inaad ku guuleysato. Ogsoonow, inaad la yaabto beerkaaga qadar sare waxay kugu noqon doontaa oo keliya inaad la yaabto waxyeelooyin aan laga soo kaban karin.
Xaaladaha badankood, Winstrol iibka waxaa lagu heli karaa xirmo ka mid ah kiniinada 10mg ama 50mg. Isticmaalayaasha labka ah ayaa tagi kara qadar sare, laakiin dumarku waa inay ku jiraan qadar hoose.
Dumarka ku dhaca iibsashada qadar sare, waa in aysan ka cararin tan iyo markii ay kiniinka kala qaybin karto saddexdii biloodba hal mar oo ay ku cunaan 12.5mg / maalin. Taa bedelkeed, ragga iibso Winstrol iyada oo kiniinada 10mg ay weli ammaan tahay in ay isticmaalaan shan capsood maalintii.
Inkastoo sida Winny loo heli karo qaab kiniin ah, dhowr magacood ayaa sidoo kale soo saara daroogada gobolka aqueous. Dheecaanku waa mid caan ah oo dhadhan xoog leh leh. Si kastaba ha noqotee, waad dhali kartaa dhadhanka adoo qaadanaya casiir ama cabitaan aad dooratay.
Qaadashada la talaali karo
Haddii aad doorbideyso qaadashada irbadaha, hal qadar oo winstrol ah oo jirka ku dhiska ah ayaa kugu sii socon doona 24 saac ee soo socda. Qiyaasta ayaa u dhexeysa 50 iyo 100mg iyadoo kuxiran inaad tahay qof dhisa jirka, isticmaale dhexdhexaad ah, ama bilow ah.
Waxaad isku duri kartaa nafaqada, gacanta sare, ama bowdada.
Winstrol nolosha nuska waxay ku xiran tahay nooca qiyaasta qaadashada qofka. Tusaale ahaan, qiyaasta afka waxay leedahay bioavailability oo ah 8-9 saacadood. Cirbadeynta, mudadu waa ilaa 24 saacadood.
Waqtiga Wakhtiga Wakhtiga
Haddii la qaado baaritaanka ka hortagga daroogada, waqtiga ogaanshaha waa saddex iyo siddeed toddobaad, siday u kala horreeyaan. Tirooyinkani waxay muujinayaan in winstrol aysan waxtar u yeelan doonin cayaartoyda firfircoon tan iyo markii raadadka daroogada ay libdhi doonaan 2 - 4 toddobaad kadib markii la dhameystiro wareegga.
Wareegga caadiga ah ee winstrol wuxuu soconayaa in aan ka badnayn lix toddobaad. Si kastaba ha noqotee, shakhsiyaadka khibrada u leh isticmaalka steroids ayaa wali qaadan kara ugu badnaan siddeed toddobaad. Waa macquul in aad yareyso qiyaasta laba todobaad ka hor dhamaadka wajiga. In kasta oo daroogadu ka tagto qolka istiraatiijiyadda steroid, waa inaadan u istcimaalayn ag C17-aa steroids.
Halka haweenka ay tahay inay ilaaliyaan qiyaasta maalinlaha ah ee 10mg / maalinta, waa inay sameeyaan celcelis ahaan 50mg / maalin. Si kastaba ha noqotee, dadka isticmaala barnaamijyada waxay sameyn karaan 100mg maalintiiba kaliya laba toddobaad ee ugu dambeeya wareegga.
Winstrol Post Cycle Daaweynta
Dhamaadka wareegga winstrol, waa inaad maro daaweyn xoogaa ah si loo yareeyo murugada iyo xakameynta hoormoonka. Waa inaad laad bilowdid heerarka testosterone caadiga ah ama aad kudhamaato muruqyada aad kasbatay lixda toddobaad. Heerarka hoose ee testosterone waxay kaa dhigi doonaan inaad niyad jabto oo aad dareento daciif.
Mudo intee le'eg ayay qaadanaysaa si ay u aragto natiijooyinka Winstrol?
Stanozolol wuxuu billaabmayaa inuu dhaqdhaqaaqa isla markiiba soo galo wareegga cusub. Hase yeeshee isbeddel muuqda ayaa dhacaya inta lagu jiro usbuuca labaad. By maalmood 14, hubi inaad ka baxdo muraayad la dhoola tan iyo markii winstrol kahor iyo kadib sawiradu way kugu jajabayaan.
Xasuuso in kor u kiciyeyaashani aysan xaqiijin natiijooyinka ugu fiican ee loo adeegsado qof kasta. Wixii huruud ah, murqaha, iyo jireed, waxaad u baahan doontaa inaad ka shaqeyso cuntadaada, nafaqada, iyo habka jimicsiga.
( 15 16 17 ) ↗
Halkan waa burbur ku saabsan waxa laga filayo wareegga toddobaad ee 6 - 8;
1 Wax isbeddel la arki karo laakiin jirka ayaa lumin doona miisaan culus oo dheeri ah
2 Xanuunka la ogaan karo ee lakabka oo leh awood korodh
4 Baaxada xajinta iyo awoodda ugu badan
6 Waa muuqaal muuqaal fiican oo muuqaal leh oo leh calool yaraan iyo waxqabadka kor u kaca
Ka fiiri qaar ka mid ah talooyinka soo-qaataha ee ku saabsan sida loo helo natiijooyinka dhismaha ee winstrol;
Noqo mid joogto ah oo joogto ah hawlahaaga si aad u hesho faa'idada muruqa dabiiciga ah
Ka gudub bacaha McDonalds iyo kuwa rabitaanka cuntada macaan, sonkorta leh, ama dufan leh
Ka fogow aalkolo haddii aadan ku sugneyn ujeeddo isdaba joog ah oo si joogto ah u waxyeeleynaya beerkaaga
Ka yaabso beerkaaga tiro badan oo biyo ah markasta
Qaado cuntooyin hodan ku ah fitamiin C sida xayawaanka liinta
Ku dar jimicsiga wadnaha ee nidaamka shaqadaada
Saaxiibtinimo saaxiibtinimo leh khudradda cagaaran
Saamaynta Dhinacyada Winstrol Common
Cawaaqibta isticmaalka Winstrol way ku kala duwan tahay hal qof ilaa kan xiga sababta oo ah kala duwanaanshaha hoormoonka. Khibrad soo raaca waxyeelo jirka waa sida la hubo geerida, laakiin waad yareyn kartaa halista adoo aan ka badneyn qiyaasta oo aad aadeyso wareeg gaaban.
Cadaadiska tijaabinta gaar ahaan inta lagu jiro marxaladda wareegga kadib
Korodhka heerka kolestaroolka xun, halkan, ayaa kor u qaadaya khataraha istaroogga ama weerarada wadnaha
Dhibaato dhexdhexaad ah oo ay sabab u tahay qallajinta ay keentay heerarka hoose ee dheecaanka synovial
Murugada ka dib wareegga
Natiijooyin gaaban oo nool, oo soconaya illaa afar toddobaad
Dhakhaatiirta udhexeeya isticmaalayaasha haweenka ah
Kobcinta dhirta 'epiphyseal'
Sida looga fogaado Winstrol Side Effects
Isticmaal kaalmada kolesteroolka
Xataa haddii uu wadnuhu caafimaad qabo, hubi inaad sameyso baaritaano badan oo soo noqnoqota. Hal tallaabo oo muhiim ah ayaa ah in la isku daro macdanta leh kolesteroolka HDL ee wanaagsan ee cuntadaada. Tusaale ahaan, saliidda kalluunka waxay ka mid tahay waxyaalihii ugu dheeraa ee la heli karo ee lagu maareeyo saameynta daawadan winstrol.
Kordhi heerarkaaga testosterone
Heerarka hoose ee testosterone ayaa dhacaya inta lagu jiro xilliga wareegga kadib marka wax soo saarka dabiiciga ah ee hormoonkan la xiro. Sida saxda ah ee wax looga qaban karo saamaynta daaweyntan waxaa ka mid ah in lagu daro qayb ka mid ah supplementary testosterone labadii toddobaad ee ugu dambeeyey wareegga.
Kala-bixinnada sida TUDCA, Liv-52, NAC, ama Yamaar-caanaha ayaa iska ilaalin doona beerkaaga.
Daweynta wareegga dambe (PCT)
Caadi ahaan, steroids iyo dhammaan hormoonada dabiiciga ah waxay qaadan doonaan toddobaadka 2 - 3 si aad ugu nadiifiso nidaamkaaga. Muddadan, waa in aad daaweynta daaweynta ku daweysid si aad u xajisid oo xasiliso heerka hormoonkaaga. Tusaale ahaan, isticmaalka Nolvadex ama clomid ayaa soo celin doona wax soo saarka testosterone.
Muddada PCT waa kala duwan tahay inta u dhaxeysa laba ilaa afar asbuuc.
Cilmi-baadhistu waxay muujinaysaa in steroids ay horseedi karto kacsanaanta fetus-ka
Dhibbanayaasha prostate iyo kansarka naasaha
Shakhsiyaadka qaba dareen-celinta xannibista
Sida loo iibsado Winstrol Online
Gobollada badankood waxay mamnuuceen isticmaalka steroids dhiska. Sidaa darteed, way adag tahay in la helo winstrol iib ah illaa aad u guurto waddamo kale oo sharciyeeyay isticmaalkeeda. Tusaale ahaan, Mareykanka, Ustaraaliya, UK, iyo Kanada, waxay ka soo horjeedaa sharciga in la yeesho, la isticmaalo, ama la qaybiyo wax steroid ah. Si kastaba ha noqotee, daroogadu waa la oggol yahay oo keliya iyadoo dhakhtar qoro oo sax ah.
Iibsiga Sharci ee Winstrol
Maadaama ay xayiraaddu ku eg tahay, winstrol waxaa laga heli karaa oo keliya suuqyada madow. Iyada oo loo maro suuqyada suuqa hoosteeda, waxaad heli kartaa waxa aad raadineyso laakiin waxaa jira fursado yar oo helitaanka alaabta asalka ah.
Qaado, tusaale ahaan, nooca la isku mudo ee Winny waa degmo aqueous. Haddii aan la soo saarin jawi nadiif ah oo nadiif ah, xalku waxa laga yaabaa in uu hayo jeermiska iyo caabuqyada. Sababtaas awgeed waa in aad sameysid qorshe aad ku heli karto shaybaar sharci ah.
Haddii kale, hubinta dukaamada internetka qaarkood waxay noqon karaan fikrad fiican.
Soo iibso Winstrol Online
Habka kaliya ee saxda ah ee lagu iibsado stanozolol-tayada heer-sare ee aadanaha ayaa ah dukaanka internetka. Waxaad u tagi laheyd inaad iibsato dawooyinka gobolada kale ee ka taxaddaraya mamnuucista steroid, laakiin taasi waxay u muuqataa mid adag. Tusaale ahaan, Mexico, sharciyada xukuma isticmaalka steroids anabolic ayaa aad ugu faraxsan muwaadiniintooda.
( 18 19 20 ) ↗
Winstrol Pudding Powder
Dufanka Winstrol 1g 5g
190 Cudurka Macdanta Cuntada ah 31.2ml -
Biyo diirran - 62.5ml
McMullin, GM, Smith, C., Watkin, GT, Scurr, JH. Waxtarka wanaagsan ee Fibrinolytic wuxuu kordhiyay Stanozolol ee Daaweynta Maskaxeed la'aanta, Joornaalka Australia iyo New Zealand ee Qalliinka, Abriil 1991.
Falanga, V., Greenberg, AS, Zhou, L., et al., Xoojinta Kaadida Collagen by Anabolic steroids Stanozolol, Qodobada NCBI, Online, December 1998
Bates, PC, Millward, DJ, Chew, LF, Saameynaha Anabolic Steroid Stanazolol ee Korriinka iyo Protein Metabolism ee Ragga, Daabacaadda PubMed, Online, September 1987
AASraw waa soo saaraha xirfadlaha ah ee budada Winstrol kaas oo leh shaybaar madaxbannaan iyo warshad weyn oo taageero ah, dhammaan wax soo saarka waxaa lagu fulin doonaa nidaamka CGMP iyo nidaamka xakamaynta tayada la socon karo. Nidaamka sahaydu waa mid deggan, labadaba tafaariiqda iyo dalabaadka jumlada waa la aqbali karaa. Ku soo dhawow si aad u ogaato macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan AASraw!
3 jecel yahay
Dib u eegida Oxymetholone: ​​Ultimate Guide ee Oxymetholone (Anadrol) Raw Proviron (Mesterolone) ee dhiska jidhka, qiyaasta, iyo wareegga